Muddo intee le'eg ayay sheekooyinka Instagram soconayaan ka hor inta aan la tirtirin? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Mudo intee le'eg ayay sheekooyinka Instagram soconayaan ka hor inta aan la tirtirin?
October 18, 2020 0 comments 663
Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha aan u soo dhigno shabakadaha bulshada ayaa u muuqda kuwo leh waqti xadidan; waqtigaas kadib, mar dambe ma arki doonno illaa aan ka raadinno astaamaheena gaarka ah. Shakiga ugu badan ee dad badani qabaan ayaa ahMudo intee le'eg ayay sheekooyinka Instagram soconayaan??
Muddo intee le'eg ayay tahay sheekooyinka Instagram?
Maqaalkan, waxaan ku xallin doonnaa su'aashaas iyo kuwo kale oo badan sida muddada fiidiyowyada aan ku dhejinno sheekooyinka, iyo waxyaabo kale. Waa in la ogaadaa in qodobkaan kaliya aan ku xusi doonno kiiska gaarka ah ee Instagram oo aan ka hadli doonin shabakad kale oo bulsheed.
In kasta oo cinwaanku leeyahay, haddana waxaan xusi doonnaa muddada daabacadaha caadiga ah, kuwa la soo diray Tooska Instagram,Intee ayey le'eg yihiin fiidiyowyada sheekooyinka Instagram? Iyo xog badan oo badan oo laga yaabo inaad xiiseyneyso.
Muddada dhajinta iyo fiidiyowyada
Qeyb ka mid ah caadadeenna maanta waa in aan la wadaagno nolol-maalmeedkeenna kuwa raacsan iyo, iyaguna, ay nala sameeyaan; ama iyada oo loo marayo feed qof kasta, farriin gaar ah ama sheekooyin Instagram ah.
Dhowr ka mid ah daabacaadyadan, haddii ay yihiin sawirro ama fiidiyowyo (muddo gaaban ama dheer), waxaan arki karnaa iyaga oo aan la cayimin ama, waxaan ku arki karnaa iyaga oo leh waqti cayiman iyo xitaa isku day.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado in haddii aad tahay ganacsade ama aad maamusho xisaab shirkadeed; Ogaanshaha dhammaan xogtaani waa mid aad muhiim u ah, maadaama ay kaa caawin doonto inaad fiiro u yeelatid kuwa raacsan iyo macaamiishaada; Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kori karto barxadda si aad u kasbato wax badan oo dheeraad ah. Waxaas oo dhami waa qayb ka mid ah xeeladaha marketing, waxtar badan oo muhiim ah.
Muddada dhejiska ee darbigaaga weyn
Waxa ugu fiican, markaad gasho koontadayada 'Instagram', waa derbiga weyn ama feed, halkaas oo lagu soo bandhigi doono daabacaadda dhammaan xisaabaadka aan raacno iyo kuweenna, dabcan; xaaladdan, waxaan heli doonnaa ikhtiyaar aan ku daabacno labada sawir iyo fiidyowyo; Wax kasta oo aan daabacno, kuwani waxay yeelan doonaan waqti joogto ah waana annaga ayaa go'aan ka gaari doonna inaan ka saarno daabacaadda ama aan ugu tagno boggeena. Sidaa darteed, wax kasta oo aan u gelino annaga feedWaxay socon doontaa inta aan go'aansanno.
Hadda, Muddo intee le'eg ayay tahay fiidiyowyada 'Instagram'? Waxyaabahani waa inay lahaadaan ugu yaraan iyo ugu badnaan waqtiga, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la ogaado in waqtiga ugu yar uu yahay 15 ilbiriqsi halka ugu sarreysa ee la oggol yahayna ay tahay 60 ilbiriqsi (1 daqiiqo).
Muddada fiidiyowyada iyo sawirrada ku jira Tooska Instagram
Qeybtaan maqaalka, waxaan ku arki doonaa mudada ay socdaan sawirada ama fiidiyowyada aan ku dirno fariin gaar ah oo aan la soo xiriirno; in kastoo, in ka badan muddada, ay tahay tirada jeer ee waxa ku jira uu arki karo qofka kale, ha ahaato hal jeer, laba jeer ama aan la cayimin.
Haddii waxa aan soo direyno, aan si toos ah uga soo xulno rugtayada, kuwani waxay ahaanayaan kuwo joogto ah; soo diraha farriintayada, wuxuu fiirin karaa inta jeer ee ay doonaan iyo waqti kasta iyo goob kasta.
Mawduucu wuu jiri doonaa ilaa aan tirtirno sheekada, laakiin wali waxay u sii ahaaneysaa qofka kale oo haddii qofka kale tirtiro, weli waan arki karnaa; Qodob muhiim ah oo tan ka mid ah ayaa ah inaan sidoo kale heli karno ikhtiyaar ah "In la joojiyo dirista farriinta"; taas oo sababi doonta in meesha laga saaro labada qof ee soo diray iyo annagaba.
Haddii ay dhacdo in sawirka ama fiidiyowga si toos ah looga qaado barnaamijka, Instagram, markaa waxaan heleynaa seddex ikhtiyaar, oo aan dooran karno ka hor inta aanan dirin farriintayada.
Hal aragti: doorashadan, qofka qaata farriintayada wuxuu arki karaa hal jeer oo keliya; tan ka dib, si joogto ah ayaa loo tirtiri doonaa
U oggolow inaad aragto mar kale: xaaladdan, qofka kale wuxuu awoodi doonaa inuu arko sawirkeenna ama fiidiyowgeenna, laba jeer haddii ay doonaan; tan ka dib, sida kiiskii hore, waa la tirtiri doonaa.
Ku sii wada sheekaysiga: ikhtiyaarka saddexaad ayaa u oggolaan doona qaataha inuu u daawan karo daa'in, iyagu ma baabi'i doonaan ka dib aragtiyo badan; Annaga, diraha ahaan, waan sameyn karnaa waxa kor ku xusan (Jooji dirista fariinta), haddii aan mar dambe la rabin kan kale inuu arko.
Dhererka fiidiyowyada ee IGTV
Cusbooneysiin dhowaan ku saabsan Instagram ayaa u oggolaatay dadka isticmaala inay soo rogaan fiidiyowyo leh waqti aad u dheer; marka loo eego kuwa caadiga ah, ee aan hore u soo sheegnay.
Fiidiyowyadani waxay ku sii jiri karaan astaanteenna aan la cayimin ama illaa inta aan annaga lafteeda ka tirtirno. Hadda, oo ku saabsan dhererka fiidiyowga, waxay ku xirnaan doontaa wax badan koontada; Hagaag, haddii ay leedahay taageerayaal yar, waxay yeelan doontaa xaddidaadyo badan; Ilaa iyo inta ay koontadu leedahay dad badan oo raacda, waxay yeelan doontaa xorriyad aad u badan.
Xaaladda kowaad, haddii koontadu ay leedahay taageerayaal yar, fiidiyowyada IGTV waa inay lahaadaan ugu badnaan 10 daqiiqo iyo ugu yaraan 15 ilbidhiqsi (oo la mid ah fiidiyaha feed caadi ah); Intaas waxaa sii dheer, culeyska fiidiyowyadu waa inuusan ka badnaan 650MB.
Haddii ay dhacdo in koontadu leedahay taageerayaal ku filan, kororku waa mid aad u tiro badan; Fiidiyowyada la soo dejinayo waxay yeelan karaan muddo u dhexeysa 15 ilbidhiqsi ilaa 60 daqiiqo (1 saac), iyada oo ugu badnaan culeyskeedu yahay 5.4Gb fiidyow kasta.
Sida aad arki doonto, farqiga u dhexeeya mid iyo kan kale waa mid aad u cajiiba; Waxay ka caawineysaa dhiirigelinta dadka isticmaala inay helaan taageerayaal badan oo dheeraad ah, si loo kordhiyo xaddidooda, iyadoo lagu saleynayo isdhexgalka.
Mudo intee le'eg ayay sheekooyinka Instagram soconayaan?
Hadda, ku saabsan mawduuca dhabta ah ee maqaalka oo dad badani shaki ka qabaan:Intee ayey le'eg yihiin fiidiyowyada sheekooyinka Instagram? AdigaImmisa ilbiriqsiyo ayaa ah sheekooyinka?.
Caadi ahaan, qof (oo horeyba cilmi ahaan ayaa loo caddeeyay), wuxuu waqti badan ku qaataa shabakadda bulshada, isagoo arkaya sheekooyinka kuwa raacsan, marka loo eego daabacaadaha ka muuqda feed. Sidaa darteed, sheekooyinka Instagram waxay noqon doonaan, in si uun loo dhigo, macnaha ugu weyn ee marketing.
Sheekooyinka waxaad ku shubi kartaa sawirro iyo fiidiyowyo, si kuwa kale ay u arki karaan si aan xad lahayn; laakiin muddo "gaaban" ah; ¿Immisa ilbiriqsiyo ayaa ah sheekooyinka? Halkii aan ku oran lahayn ilbiriqsiyo, waxaan u turjumeynaa saacado, taas oo noqon doonta 24 saacadood, taas oo ah, maalin dhan.
Laakiin dabcan, kiiskan, waqtiga gabagabada, waxaan ula jeednaa sheeko dhaqameed, ka dib waxaan dooran karnaa ikhtiyaarka "Sheekada Featured"; Xaaladdan oo kale, waxyaabahayagu way sii socon karaan si aan xad lahayn, xitaa haddii aysan mar dambe ka muuqan feed muhiim, marka haddii qof doonayo inuu arko 24 saac ka dib, waa inuu aadaa derbigeenna.
Marka laga hadlayo fiidiyowyada aan soo dhigno, waxay kaliya ugu badnaan haystaan ​​15 ilbiriqsi oo soconaya waxayna ansax noqonayaan 24 saacadood, haddii aynaan u dooran "Sheeko Featured". Sheekooyinka muuqaalka leh, waxaan fursad u heli doonnaa inaan tirtirno ama aan si joogto ah uga tagno, iyadoo kuxiran go'aankeenna.
Fiidiyowga soo socda ee aan hoosta kuugu soo bandhigi doono, waxaad ku baran doontaa faahfaahin dheeraad ah iyo macluumaad dheeri ah oo la xiriira sheekooyinka Instagram, kuwaas oo aanan ku xusin qoraalkan; marka waa muhiim inaad aragto hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato.
Hadaad yaabeyso Maxaa dhacaya haddii aad qof xannibtid Instagram?, markaa boostadani waa adiga, gali xiriirka oo soo hel.
1 Muddo intee le'eg ayay tahay sheekooyinka Instagram?
2 Muddada dhajinta iyo fiidiyowyada
2.1 Muddada dhejiska ee darbigaaga weyn
2.2 Muddada fiidiyowyada iyo sawirrada barta tooska ah ee 'Instagram Direct'
2.3 Dhererka fiidiyowyada ee IGTV
2.4 Mudo intee le'eg ayay sheekooyinka Instagram soconayaan?
Sida loo helo qof Instagram si fudud?
Sidee loo arkaa fariimaha aan ku jeclaaday barta Instagram?